तेह्र बर्षअघिको त्यो बैशाख
– २०६३ असार २, सरकार र माओवादीबीच ८ बुँदे सहमति, माओवादीका शीर्ष नेता सार्वजनिक ।
– २०६३ कार्तिक ७, वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
– २०६९ भदौ १४, पहिलो संविधानसभा भंग ।
– २०७२ असोज ३, संविधानसभाबाट संविधान जारी ।
हाम्रो पुस्ताका लागि मुखाग्र यी तिथिमिति भावी पुस्ताका लागि निकै कष्ट गरेर कण्ठस्थ गर्नुपर्ने इतिहास हुन् । दशक लामो पट्यारलाग्दो अन्योल र निराशालाई चिर्दै नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनेर राज्य पुनर्संरचनामार्फत संघीयता अंगीकार गरी तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनवटै सरकारले काम गरिरहेका छन् । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि भन्ने पनि गरिएको छ– गाउँगाउँमा सिंहदरवार आएको छ । तर, जीवन ब्यवहारमा सिंहदरवार जनताको झुपडीसम्म पुगिसकेको छैन । नेता कार्यकर्ताको तहसम्म सिंहदरवार आए पनि जनताकै झुपडीमा भने सिंहदरवार आइसकेको छैन । आज तीनै तहका सरकारमा हुने कचिङ्ल र राजनीतकि वृत्तमा देखिने अलमललाई हेर्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ– के यो उपलब्धि सहजै प्राप्त भएको हो ? दश बर्षे जनयुद्ध आफैमा एउटा ठूलो इतिहासको गाथा हो । यसमा त्यो इतिहासका पाना पल्टाउन लागिने छैन । मात्रै १३ बर्षअघिको बैशाखलाई संक्षिप्तरुपमा सम्झने प्रयास गरिने छ ।
एकैछिन २०६३ बैशाख १० गतेको दाङ घोराहीको दृश्य सम्झौं । नागरिक समाज दाङको संयोजनमा त्यस दिन घोराहीमा ठूलो संख्यामा राप्तीवासी ओइरिएका थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादीको आव्हानमा राप्तीका हरेक घरबाट जनता नाङ्गा खुट्टा पैदल हिडेर घोराही पुगेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट हामीले यस्तो समाचार लेखेका थियौंः
रोल्पाको थवाङ, भावाङ, खुंग्रीलगायतका स्थानबाट आएका ५० हजारभन्दा बढी जनता मसिनाको गाउँ हुँदै बजार प्रवेश गर्दा त्यस क्षेत्रका जनताले ‘लोकतान्त्रिक योद्धाहरुलाई स्वागत’ लेखिएका स्वागतद्वार खडा गर्नुका साथै ताली बजाउँदै घरका छतछतबाट पानी छर्केर स्वागत गरेका थिए ।
यो उभार र उर्जाको मूल आधार निःसन्देह एक दशकसम्म चलेको माओवादी जनयुद्ध थियो । राजनीतिको ‘र’ नजानेकाहरु स्वयं राजनीतिको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगे । अधिकारको ‘अ’ नसुनेकाहरु स्वयं अधिकार दिने र लिने तहमा पुगे । सँधै अर्काका लागि औजार बनाउने दलितहरु आफै बमबारुद बनेर सरकारी अड्डामा पड्किए । जमिन्दारको खेतबारीमा आफ्नो जीवन अर्पेका थारु र मधेशीहरु अब खेतबारीमा मात्र होइन राज्यसत्तामा समेत साझेदारी खोज्दै आन्दोलनको ज्वाला बनेर निस्के । सत्ताबाट पाखा लगाइएका आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो इतिहास खोज्दै जुर्मुराए । आधा हिस्सा ओगटेर पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झारिएका महिलाहरु पिठ्यूँमा लालाबालासहित कम्मरमा कुखरी र हातमा बन्दुक लिएर हिडे । विद्यार्थीहरु कापी कलम थन्काएर बिद्रोहमा जुटे । गाउँमा कखरा पढाउँदै चेतनाको दियो सल्काउने गुरुहरु अधिकार र चेतनाको दियो बाल्दै संघर्षमा होमिए । काठमाडौंको खाल्डोबाट ठगिएका कर्णाली र राप्तीका पहाडहरु जुलुस बनेर राजमार्गमा पोखिए । गाउँका गाउँ युवाविहीन भए तर बिचलित भएनन् बाबाआमाहरु । आँखै अगाडि बाआमा मारिंदा डग्मगाएनन् लालाबालाहरु । घरहरु खरानी बने, गाउँहरु रित्ता भए तर पनि रुकेन अधिकारको आवाज ।
राप्ती आफैमा बिम्ब बनेको छ यो बेला । कहिल्यै नाम नसुनिने रोल्पा अनि रुकुमका पहाड र राप्तीका बेसी फाँट यो कालमा सबैभन्दा धेरै पढिए र सुनिए । देशकै तुफानी केन्द्र बन्यो राप्ती । बागमती, कोशी र गण्डकीमा पानी बगिरहँदा राप्तीमा रगत बगिरहेथ्यो एकनास । देखिन्थ्यो जताजतै लाशैलाश । ड्यामड्याम गोलीका आवाजसँगै दाङको बर्गदी, फूलबारी र गोल्टाकुरीमा थुपारिएका गरीब किसानका लाश होऊन् या रोल्पाको भावाङ र सुकीदहमा गाडिएका जनताका छोराछोरीको सामूहिक चिहान । राप्ती नराम्ररी रोएको छ । राप्तीको पानीसँगै रगत र आँसु पनि बरोबर बगेको छ । यही रगत, आँसु र पसिना फेरियो संविधानसभामा । त्यसैले नयाँ संविधान हजारौं सपनाको संग्रह हो । तर, यो कागजी दस्तावेजले दशकअघिका ती सपना कति पूरा हुन्छन्, आजका दिनमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने सवाल यही हो ।
यो ऐतिहासिक कालखण्डमा सञ्चारकर्ममा तैनाथ हामी आफैले पनि कम्तीका सास्ती व्यहोर्नुपरेन । यो अभूतपूर्व कालखण्डको साक्षी बनेका छौं हामी । नेपथ्यभित्र र बाहिरका दृश्यहरुको साक्षात्कार गर्ने मौका पाएका छौं हामीले । गाडी हिड्ने राजमार्ग ‘लाशमार्ग’ बनेका सचित्रण खबर लेख्न विवश भयौं यो बेलामा । भालुवाङ पूर्वको जंगलमा प्रहरी चढेको यात्रु बसमाथि बिद्रोहीले आक्रमण गरेपछि दिनभर राजमार्ग ‘लाशमार्ग’ बनेको घटना होस् या प्युठानमा माडी तरेर घाँस जाँदै गरेका महिलाहरु सेनाको आक्रमणमा परी नदीको किनारामा लाश बनेर लडेको दृश्य । जनजनका मनहरु भतभती पोल्ने घटना थिए यी । लाग्थ्यो, यी दृश्य नदेखिने दिन कहिले आउने होला ? कागजका पानाहरु टुक्राटुक्रा पारी मोजाभित्र लुकाएर युद्धक्षेत्रका खबर बोकेर गाउँबाट शहर पस्दा लाग्थ्यो, गाउँ शहरका खबर खुलेआम लेख्ने दिन कहिले आउँछन् होला ? छापाका खबर बजार पुग्दानपुग्दै शुरु हुन्थ्यो चियोचर्चा । कति साथी ब्यारेकका बन्दी बने, कतिले कुटाइ खाए । यी घटनाबाट अवाक भएर नै देशको शान्तिपूर्ण निकासका लागि मागिएको थियो संविधानसभा ।
हजारौं जनताको रगत र लाखौं जनताको पसिनाले सिञ्चिएको एउटा खेतबारी । बीचबीचमा बन्दै भत्कँदै गरेका सहमतिका पर्खालले घेरिएको एउटा सपनाको घर । कतिपय शक्तिका आँखामा फल नदिने आक्चे रुख । यस्तै यस्तै बिम्बले चिनिने संविधानसभाले संविधान दिएर पनि तीन तहको निर्वाचन भइसकेर सरकारहरुले पनि केही कार्यकाल बिताइसकेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले दोस्रो बजेट ल्याउँदैछन् भने स्थानीय सरकारहरु तेस्रो बजेटको तयारीमा छन् । गत आर्थिक बर्षको बजेटले जनताको मन छुन सकेन । एक बर्षको प्रादेशिक अभ्यासले ‘अँ, संघीयता गज्जबको ब्यवस्था हो’ भन्ने बनाइसकेको छैन । त्यसो त दुई बर्षे स्थानीय सरकारको कार्यकालले पनि गाउँगाउँमा सिंहदरवार आइसकेको अनुभूति जनतामा भएको छैन । यसको अर्थ केही पनि भएको छैन र सबै सकियो भन्ने होइन तर अब सबै तहका सरकारहरु परिणाम दिने काममा जुट्नुपर्छ । को सरकारमा छ वा कसले सरकार चलाएको छ, ? यो महत्वपूर्ण सवाल होइन । महत्वपूर्ण सवाल यो हो कि हरेक तहका सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको सार दिन सक्नुपर्छ । अनिमात्र हजारौंको संख्यामा सडकमा ओइरिएका नाङ्गा खुट्टाहरुले परिवर्तनलाई नजिकबाट छुन र भोग्न पाउने छन् ।
राजनीतिक घटना हेर्ने हो भने निकै ढिला गरी भए पनि संविधान जारी भएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि माओवादी विद्रोही शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु, संविधानसभाको चुनाव हुनु, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणा हुनु, आठ बर्ष समय गुजारेर भए पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्नु, नयाँ संविधानमार्फत राज्यपुनर्संरचना गरी संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु र तीनै तहका निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनमा जानु आजसम्मका मुख्य राजनीतिक उपलब्धि हुन् । संरचनागतरुपमा भन्ने हो भने मुलुकमा आमूल परिवर्तन नै भएको हो ।
यसलाई जोगाउँदै जनताको जीवन रुपान्तरण र देशको समृद्धि अबको बाटो हो । तर, यो काम त्यति सजिलै भइहाल्ने देखिन्न । एकातिर फेरि पुनरुत्थानवादीहरु सल्बलाउन थालेका छन् भने अर्कोतिर हिजो परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक शक्तिहरुको सोंच, चिन्तन र शैली तदनुकूल विकास हुन सकेको छैन । संरचना फेरिए पनि त्यसलाई जनताको पक्षमा कार्यान्वयन गर्ने शक्तिहरुको सोंच, चिन्तन र शैली बदलिएन भने उपलिब्धले बहुसंख्यक जनताको जीवन रुपान्तरण नगर्न सक्छ । अहिले लोकतन्त्र त छ तर यो सीमित राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको पहुँचभन्दा बाहिर आउने होइन कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेताहरुको जीवन बदलिने तर जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा कुनै फेरबदल नहुने हो भने यसले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई स्थान दिनसक्छ ।
अहिले एकातिर घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरु प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन चाहन्छन् भने अर्कोतिर कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त नै भएको छैन, भनिएका जति सबै भ्रम हुन् भन्ने सोंच विस्तार गर्न खोजिदैछ । पहिलो प्रवृत्ति त लोकतन्त्रको बैरी नै हो भने दोस्रो प्रवृत्तिले पनि मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्दैन । प्राप्त उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गर्ने र नयाँ उपलब्धिका लागि निरन्तर संघर्ष मात्र गरिरहने सोंचले पनि तत्काल जनताको चाहना पूरा गर्न सक्दैन ।
स्पष्ट हुनुपर्ने सवाल के हो भने संरचनागतरुपमा परिवर्तन भएको साँचो हो तर संरचना चलाउने शक्तिहरु बिचलनउन्मुख देखिएको पनि अर्को साँचो हो । त्यसैले अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिबाटै तमाम बेथितिविरुद्ध प्रहार गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र थप विकासका लागि अघि बढ्नु नै सबै प्रवृत्तिका शक्तिको हितमा छन् । अहिले शक्तिमा रहेका दलहरु थप एकताबद्ध हुँदै हिजो आन्दोलनको बेला जनतासँग गरिएका वाचा र आफ्ना एजेण्डाप्रति गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै उपलिब्ध नै भएको छैन भनेर गैरसंवैधानिक गतिविधिउन्मुख शक्तिहरु पनि यही संविधानभित्रैबाट बेथिति र विसंगतिविरुद्धका सामाजिक अभियान चलाएर अघि बढ्नसक्ने राजनीतिक मैदान खाली नै छ । अब समृद्धि समृद्धि मात्र भनेर हुँदैन, कसका लागि र कस्तो समृद्धि गरिदैछ, यो पनि स्पष्ट गरेर जनतालाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
लेखक दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीतिक मामिलामा कलम चलाउनु हुन्छ ।